Koox ka dhisan dalka Spain oo qarka u saaran inay la wareegto Weeraryahanka Arsenal ee Alexandre Lacazette… (Meeqa milyan ayay ku qaadanaysaa?) – Gool FM
(London) 09 Agoosto 2020. Weeraryahanka Arsenal ee Alexandre Lacazette ayaa qarka u saaran inuu ku biiro koox ka dhisan Waddanka Spain sida wararku ay sheegayaan.
Alexandre Lacazette ayaa la warinayaa inuu 30 milyan oo gini ugu dhaqaaqi karo kooxda Atletico Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain oo aad u doonaysa saxiixa xiddigan.
Pierre-Emerick Aubameyang ayay doonaysaa Arsenal inay sii haysato halka xiddiga reer France ee Lacazette loo ogolaan doono inuu tago.
Jariiradda Daily Star ayaa warianysa in Alexandre Lacazette uu haatan qarka u saaran yahay inuu 30 milyan oo gini oo u dhiganta 33 milyan oo euro ama 39 milyan oo dollar ugu dhaqaaqo Kooxda Atletico Madrid.
Dhinaca kale The Gunners aad ugu dhow inay heshiis cusub ku abaal-mariso ciyaaryahankeeda Pierre-Emerick Aubameyang, marka ay heshiiskaas dhammaystiraanna waxa ay Lacazette u ogolaan doonaan inuu tago.
Tan iyo markii uu ku soo biiray Arsenal sanadkii 2017-kii, Lacazette waxa uu raadinayey inuu heli boos joogto ah oo uu ka ciyaaro, waxaana la filayaa inuu iska tagayo London oo uu dhaqaaqo caasimadda Spain si uu ugu biiro Atletico Madrid.